Soosaaraha Shaaha Cagaaran Soo saare iyo Badeecad | Kindherb
Soosaarida Badda Buckthorn
Noni budada budada ah
1. Magaca magaca: Soosaarida shaaha cagaaran
10% -98% polyphenols by UV
10% -80% kaateetooyin ay HPLC leedahay
10-95% EGCG ee HPLC
10% -98% L-theanine ee HPLC
3. Muuqaal: bunni jaalle ah ama budo ganaax cad leh
4. Qaybta la isticmaalay: Caleen
5. Fasalka: Darajada cuntada
6. Magaca Latin: Camellia sinensis O. Ktze.
7. Faahfaahinta xirxirka: 25kg / durbaan, 1kg / bac
(25kg miisaanka saafiga ah, 28kg miisaanka guud; oo lagu buuxiyey kartoon-durbaan leh laba bac oo gudaha ah; Cabbirka Drum: 510mm sare, dhexroor 350mm)
(1kg / Bag miisaanka saafiga ah, 1.2kg miisaanka guud, oo lagu buuxiyay bac aluminium aluminium ah; Dibedda: kartoonka warqadda; Gudaha: lakab laba-gees ah)
9. Waqtiga hogaaminta: In lagu gorgortamo
10. Awoodda taageerada: 5000kg bishii.
Mucjisada Shaaha Cagaaran
Cunto ama cabitaan kale ma lagu soo warramey inay leeyihiin faa'iidooyin caafimaad oo badan sida shaaha cagaaran? Shiineysku waxay wax ka ogaayeen waxtarka daawada ee shaaha cagaaran laga soo bilaabo waqtiyadii hore, iyagoo u adeegsanaya inay ku daweeyaan wax kasta oo ka yimaada madax xanuun ilaa niyad jab. Nadine Taylor waxay ku qortay buugeeda Green Tea: Sirta Dabiiciga ah ee Nolol caafimaad qabta, in shaaha cagaaran daawo ahaan looga adeeganayay Shiinaha ugu yaraan 4,000 oo sano.
Maanta, cilmi baarista sayniska ee Aasiya iyo galbeedka labadaba waxay bixinaysaa caddayn adag oo ku saabsan faa'iidooyinka caafimaad ee muddada dheer la xiriira cabitaanka shaaha cagaaran. Tusaale ahaan, 1994-kii Joornaalka Machadka Kansarka Qaranka ayaa daabacay natiijooyinka daraasad cudur faafa oo tilmaamaysa in cabitaanka shaaha cagaaran uu yareeyay halista kansarka hunguriga ee ragga iyo dumarka Shiinaha ku dhowaad lixdan boqolkiiba. Baarayaasha Jaamacadda Purdue waxay dhawaan soo gabagabeeyeen in isku darka shaaha cagaaran uu hor istaago koritaanka unugyada kansarka. Waxaa sidoo kale jira cilmi baaris tilmaamaysa in cabitaanka shaaha cagaaran ay hoos u dhigeyso wadarta heerarka kalastarolka, iyo sidoo kale hagaajinta saamiga wanaagsan (HDL) kolestaroolka iyo kan xun (LDL) kolestaroolka.
Isku soo wada duuboo, halkan waxaa ka mid ah xaalado caafimaad oo kooban oo cabitaanka shaaha cagaaran lagu tilmaamo inay waxtar leedahay
1. Kahortaga Kansarka
2.Cardio ilaalinta; ka hortagga atherosclerosis
3.Ka hortagga suuska ilkaha iyo cirridka
Isugeynta isu-geynta kahortagga-dhiig-baxa si looga hortago xinjirowga dhiigga
6.Kordhinta shaqada kilyaha
7.Dhowridda iyo soo celinta habka difaaca jirka
8.Xakamaynta cudurada faafa
9.To caawin dheefshiidka iyo kaarbohaydrayt adeegsiga
10.Ka hortagga unugyada unugyada iyo unugyada
Shaah ayaa la beeri jiray qarniyo, laga bilaabo Hindiya iyo Shiinaha. Maanta, shaahu waa cabitaanka ugu badan adduunka, marka laga reebo biyaha oo kaliya. Boqolaal milyan oo qof ayaa cabta shaaha, daraasadaha ayaa soo jeedinaya in gaar ahaan shaaha cagaaran (Camellia sinesis) uu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo badan.
Waxaa jira saddex nooc oo shaaha u waaweyn - cagaar, madow, iyo oolong. Farqiga ayaa ku jira sida shaaha loo farsameeyo. Shaaha cagaaran waxaa laga sameeyaa caleemo aan khafiif aheyn waxaana lagu soo waramayaa inuu ku jiro isku soo ururka ugu badan ee antioxidants awood badan oo loo yaqaan polyphenols. Antioxidants waa walxo la dagaallama xagjirnimada bilaashka ah - isku-darka unugyada jirka ku jira ee beddela unugyada, waxyeeleeya DNA, iyo xitaa sababa dhimashada unugyada. Saynisyahanno badan ayaa rumeysan in xagjirnimada lacag la’aanta ahi ay gacan ka geystaan ​​geeddi-socodka gabowga iyo sidoo kale horumarinta dhowr dhibaatooyin caafimaad, oo ay ku jiraan kansarka iyo cudurrada wadnaha. Antioxidants-ka sida polyphenols-ka ee ku jira shaaha cagaaran ayaa dhexdhexaad ka noqon kara xag-jiryada xorta ah waxaana laga yaabaa inay yareeyaan ama xitaa gacan ka geystaan ​​ka-hortagga dhibaatooyinka ay geystaan.
Dawada dhaqameed ee Shiinaha iyo Hindiya, xirfadlayaashu waxay u isticmaaleen shaaha cagaaran kiciyaha, durayo (si ay uga caawiyaan jirka inay ka saaraan dheecaanka xad dhaafka ah), astringent (xakameynta dhiigbaxa iyo caawinta bogsashada nabarrada), iyo hagaajinta caafimaadka wadnaha. Isticmaalka kale ee shaaha cagaaran waxaa ka mid ah daaweynta gaaska, nidaaminta heerkulka jirka iyo sonkorta dhiigga, dhiirrigelinta dheefshiidka, iyo hagaajinta hababka maskaxda.
Shaaha cagaaran ayaa si baaxad leh loogu darsay dadka, xayawaanka, iyo tijaabooyinka sheybaarka.
Cudurka xididdada dhiigga
Daraasadaha caafimaadka ee eegaaya dadka waxay muujinayaan in sifooyinka antioxidant ee shaaha cagaaran laga yaabo inay ka hortagaan atherosclerosis, gaar ahaan cudurka halbowlayaasha wadnaha. Daraasadaha ku saleysan tirada dadka waa daraasado la socda kooxo badan oo dad ah waqti ka dib ama daraasado isbarbardhigaya kooxaha dadka ku nool dhaqamada kala duwan ama leh cuntooyin kala duwan.
Baarayaasha ma hubo sababta shaaha cagaaran uu u yareynayo halista cudurka wadnaha iyadoo hoos loo dhigo heerarka kalastarolka iyo triglyceride. Daraasadaha ayaa muujinaya in shaaha madow uu leeyahay saameyn lamid ah. Xaqiiqdii, cilmi baarayaashu waxay ku qiyaaseen in heerka wadna xanuunka uu hoos u dhacayo 11% iyadoo la isticmaalayo 3 koob oo shaah ah maalintii.
Cabitaanada dawooyinka & waxqabadka & solube-biyo & alaabada caafimaadka sida kaabsulka ama kaniiniyada
Hore: Soosaarida digirta cagaaran
Xiga: Soosaarida Abuurka Griffonia
Soosaarida paniculata Andrographis
Soo saar cirbad geed
Soosaarida Huperzia Serrata
Yerba Mate Warbixiinta
Soosaarida Picrorhiza Kurroa, Soosaarida Hypericum Perforatum, Avena Sativa Beta Gucan, White Willow Barkhad Soosaaray, Lagerstroemia Speciosa Soo saar, Soosaarida Baasaboorka,